Brundia oo dalkeeda ka mamnuucay Idaacadaha Maraykanka iyo Ingiriiska. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Brundia oo dalkeeda ka mamnuucay Idaacadaha Maraykanka iyo Ingiriiska.
On Apr 1, 2019 349 0
Idaacadaha ku hadla afka Ingiriiska iyo Maraykanka ee lagu kala magacaabo BBC iyo VOA ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay in laga dhageysto wadanka Burundi oo kamid ah wadamada dhaca qaaradda Africa.
Kulan ay yeesheen xubnaha hay’adda qaranka ee Isgaarsiinta dowladda Burundi ayaa laga soo saaray go’aan ah in idaacadaha BBC-da iyo VOA-da ay mamnuuc ka yihiin iney ka howlgalaan wadanka Burundi, baraamijita iyo wararka ay tabiyaanna laga dhageysto.
Agaasimaha hay’adda Qaranka ee Isgaarsiinta Burundi ninka lagu magacaabo Nestor Bakumunkuzni ayaa shaaca ka qaaday in lasii kordhiyay xanibaada ay kusoo rogeen warfaafinta Ingiriiska iyo Maraykanka ee BBC iyo VOA.
Wuxuu intaa ku daray in wariyaasha ajnabiga ah iyo kuwa u dhashey Burundi-ba ay mamnuuc ka tahay iney warbixino ka hadlaya Burundi u diraan idaacadaha ay dowladdu mamnuucay.
Agaasime u hadlay idaacadda Maraykanka ee VOA-da ayaa sheegay in dowladda Burundi ay ku wargelisya go’aanka cusub, wuxuuna sheegay in arintan ay kamid tahay cunaqabateynta lagu hayo wariyaashooda.
“Waxaa nalagu wargeliyay in wariyaasha ku sugan Burundi laga mamnuucay iney lasoo xiriiraan VOA-da, waxaana rumeysannahay in go’aankan uu halis gleinayo xurriyadda hadalka ee wadanka Burundi” ayuu yiri agasimaha VOA-da.
Warbaahinta Ingiriiska ee BBC-da oo iyadana ka hadashey tallaabada looga mamnuucay wadanka Burundi ayaa sheegtay iney cambaareyneyso go’aanka dowladda Burundi oo ay ku tilmaamay inuu yahay mid kasoo horjeeda waxay ugu yeereen xurriyadda warbaahinta.
Dowladda Burundi ayaa ku eedeysay idaacada Ingiriiska iney baahisay warbixin ay ku weerareyso sirdoonka wadankaas, halka Idaacadda Maraykanka ee VOA-dana ay shaqaaleysiisay wariyaal mucaarad ku ah dowladda.
Dalka Burundi waxaa ka jira maamul keligii talis ah oo ay dadka wadankaas kasoo horjeedaan, waxaana talada wadankaas gacanta ku haya madaxweyne Pierre Nkurunziza, kaas oo ay isku dhacsanyihiin midowga Africa.
Idaacadaha Maraykanka iyo Ingiriiska aya inta badan ka howlgala wadamada caalamka, waxayna ku socdaan siyaasadda dowladaha ay afkooda ku hadlaan, iyagoona faafiya warar iyo warbixinno lid ku ah danaha dadka Muslimiinta ah.
Yuusuf Xassan oo ah xilliban katirsan baarlamaanka wadanka Kenya, horeyna u ahaa wariye ka shaqeeya laanta Afsoomaaliga ee Idaacadda Ingiriiska ayaa sheegay in BBC-du ay tahay idaacad ay leedahay dowladda Ingiriiska, kuna socota fakarka iyo towjiihaadka dowladda Ingiriiska.